Araka ny efa fantatra, dia voatendry ny alatsinainy teo ny praiminisitry ny marimaritra iraisaina, Ntsay Christian. Mbola maro ihany anefa ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa, ary samy manana ny heviny mahakasika izany avokoa ny rehetra. …Tohiny
Niseho tampoka indray ny kolonely Lylyson de René rehefa nisitri-belona teto Madagasikara taorian’ny fotoana naharitra. Raha ny fahitana ny sariny sy ny mpanao gazetin’ny miara-manonja miara-maka sary azy ary miparitaka any anaty facebook, omaly, dia …Tohiny
Toamasina : Jiolahy miisa telo lavon’ny polisin’ny FIP
Mitohy ny ezaka amin’ny famongorana ny asa ratsy ao amin’ny renivohi-paritanin’i Toamasina. Jiolahy miisa telo indray mantsy no lavon’ny polisin’ny Fip any an-toerana taorian’ny fifanenjehana sy ny fifampitifirana mahery vaika nisy teo amin’ny roa tonta …Tohiny
Depiote 73 : Nifanaretsaka nanatitra CV
Tojo amin’ny tanjona iriana izao ny solombavambahoaka 73, izay mpitanin’andro etsy amin’ ny parvis Analakely amin’izao fotoana izao, tsy inona izany fa ny seza izay efa nandrandraina efa ela. Omaly maraina mantsy dia nifanaretsaka samy …Tohiny